Home AFRIKA CARUURTA FOOTBALL George Weah Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Horyaalka Kubadda Cagta iyo Madaxweynaha oo si fiican loo yaqaan Nickname; 'King George'. Dabeecadda Waalidiinta Caruurta ee George plus iyo Warqada Jir-Dhaafidku waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor magaceeda, nolosha qoyska, xiriirka nolosha iyo wax kale oo aan la garanaynin ee OFF-Pitch oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay doorka Ballon d'Or ama doorka Hogaaminta ee Liberia, laakiin dad badani waxay tixgeliyaan taariikhda George Weah ee ah mid aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
George Weah Sheeko Xeeldheer Xog -Nolosha Hore
George Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah wuxuu ku dhashay 1st October 1966 (da'da 51), Monrovia, Liberia.
George waxaa dhab ahaantii keenay awowgiis ka dib markii aabihiis dhintay. Wuxuu ku soo koray West Point, oo ah magaalada shantytown oo ay maamusho baandooyinka deriska. Wuxuu xubin ka yahay Kru Qowmiyadeed, oo ka soo jeeda koonfurta bari ee Liberia Gobolka Kru, mid ka mid ah meelaha ugu saboolsan dalka.
George Weah Sheekada Carruurta
Waxa uu dhiganayay dugsiga dhexe ee Congress Congress iyo dugsiga sare ee Wells Hairston High School waxaana lagu soo waramayaa inuu ka tagay sannadkii ugu dambeeyay ee daraasaddiisa. Wuxuu bilaabay inuu kubadda cagta u ciyaaro dhalinyarada da 'yarta ah ee dhalinyarada ah ee da'doodu ka weyn tahay 15 kadibna u dhaqaaqay naadiyada kale ee kubadda cagta, isaga oo u muuqda inuu door ka ciyaari karo Mighty Barrolle iyo Invincible Eleven halkaas oo uu dhaliyey goolal xNUMX xili 24.
Ka dib markii ay kor u kaceen kooxdooda, Cameroon ayaa soo bandhigtay isaga oo u saxiixay naadiga ugu sareeya horyaalka, kooxda Yaound FC. Ciyaaryahanka reer Cameroon Claude Le Roy ayaa ku wargaliyay wargeyska isboortiga ee kooxda AS Monaco ee Arsene Wenger. Wenger ayaa u duulay Afrika si uu u helo arin naftiisa ah, ka dibna waxa uu saxiixay Weah kooxdiisii.
Ka hor inta uusan kubada cagta u ogolaanin inuu dibada u guuro, Weah wuxuu u shaqeeyey shirkadda Liberia Telecommunications a farsamayaqaan isku xira. Waxa uu noqday kii ugu horreeyay, oo ku dhawaad ​​kaliya, Liberian si uu u barto Yurub. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
George Weah Sheeko Xeeldheer Xog -Nolosha Xiriirka
Clar Weah waa xaaska George Weah. Waa muwaadin Maraykan ah oo Maraykan ah oo jinsiyad ahaan ka soo jeeda Jamaica.
George iyo Clar
Waxay ku koray Florida, Maraykanka, halkaas oo ay ka soo shaqeysay dhawr shirkadood oo ay ka mid yihiin makhaayad Caribbean iyo dukaanka raashinka.
Sida laga soo xigtay wargeysyada, George iyo Clar ayaa la kulmay Maraykanka oo ku yaala laanta Bangiga Chase ee Clar oo ka shaqeynayay sarkaal adeegga macaamiisha. Weeraryahankii hore AC Milan ayaa lagu soo waramayaa inuu bangiga u tagay si uu u furo xisaab markii uu indhihiisa qabsaday Jamaica qurux badan. Sheekada jaceylku waxay si cad ujoogsadeen, waxayna sii waday inay sii xoogeystaan ​​inkastoo dhowr arrimood oo xanta ah ee gaalnimada ku wehelin Weah.
Clar, oo ka duwan dumarka Caribbean ee ka soo jeeda, dharka quruxda badan, ayaa loo arkaa maaha oo kaliya istaraatajiye wanaagsan oo qurux badan, sidoo kale, dhoola cad oo xitaa marka ay adag tahay in ay awoodaan in ay jebiyaan caqabadaha. Isbahaysiyada u dhow ayaa sharraxaya iyada oo ah caqli iyo lahaansho nooc gaar ah aura. Jamaican waxay awood badan ku leedahay ninkeeda. Labadaba waxay leeyihiin saddex carruur ah: George Weah Jr, Tita iyo Timothy.
Timothy Weah, oo ah wiilka 1995 ee ku guuleystay Ballon d'Or George Weah, ayaa saxiixay qandaraaskiisa ugu horeeyay ee uu kula joogo Paris Saint-Germain.
Xiddiga da'da yar ee 17 waxa uu raacayaa wadadii aabihiis, kaasoo seddex sanno ku qaatay kooxda Ligue 1 ka hor inta uusan u dhaqaaqin AC Milan. Timothy wuxuu ku biiray akadeemiga PSG ee 2014 waxana uu u soo qaatay U-15s iyo U-19s labadaba.
George Weah Sheeko Xeeldheer Xog -Nolosha Qoyska
Aabihiis, William T. Weah, Sr. wuxuu ahaa makaanik halka hooyadiis, Anna Quayeweah ahaa iibiye. Waxa uu leeyahay saddex walaalo ah, William, Moses iyo Wolo.
George Weah wuxuu ahaa mid ka mid ah saddex iyo toban carruur ah oo si weyn ugu kicitimay awowgiis oo u dhashay Christian, Emma Klonjlaleh Brown ka dib markii uu waalidku kala tagay.
George Weah Sheeko Xeeldheer Xog -Guusha Yurub
Haa, wuxuu ahaa hibo cayriin oo leh tababar yar oo rasmi ah. Weah wuxuu u muuqday mid hore u soo kabanaya mustaqbalkiisa Yurub. Si kastaba ha ahaatee, weeraryahanka xoogan ee 6'2 ayaa si dhaqso ah ugu soo ciyaaray tartanka waxaana uu sameeyay gool dhaliye awood leh.
Laacibkii hore ee kooxda Paris Saint-Germain ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu ku guuleysto horyaalka Faransiiska ee 1993 iyo horyaalka Ligue 1 ee 1994. Xilli ciyaareedkii 1994-95, wuxuu ku qaaday PSG Faransiiska iyo Ligue Cup waxaana uu ku dhameystay gooldhalinta Champions League. Sanadkii ka dib, waxaa loo magacaabay ciyaaryahankii African, Europe iyo FIFA ee sannadka - guulo aan horay loo arag.
George Weah Sheeko Xeeldheer Xog -Dagaallami
Weah ayaa laga mamnuucay lix ciyaarood oo yurub ah oo ku saabsan jebinta sanka ee daafaca reer Portugal Jorge Costa on 20 November November 1996 ee tunnel ciyaartoyda ka dib markii ay Milan isku aadeen Porto kulankii Champions League. Weah wuxuu sheegay in uu qarxiyay niyadjab ka dib markii uu isku dayay cunsuriyad cunsuriyad Costa inta lagu jiro labada kooxood ee kulamada Champions League ee xilliga dayrta.
Costa ayaa si xoogan u beeniyay eedeymaha cunsuriyadda, loomana soo oogin UEFA sababtoo ah markhaatiyo ma xaqiijin karo eedeymaha Weah, xitaa xitaa saaxiibadiisa Milan. Weah ayaa markii dambe isku dayay inuu raali galiyo Costa, lakiin taas waxaa diiday inuu ku dhaleeceeyo Portuguese-ka, kaasoo ka soo horjeeda eedeymaha cunsuriyada ah ee lagu soo oogay inuu yahay mid been abuur ah isla markaana wuxuu Liberian u qaaday maxkamadda.
Dhacdadan ayaa keentay in Costa uu qalliin wajaho wajiga oo uu maqnaan doono seddex isbuuc. In kasta oo uu dhacey, Weah ayaa wali heley abaalmarinta FIFA Fair Play ee 1996.
George Weah Sheeko Xeeldheer Xog -Diinta
Weah wuxuu u beddelay diinta Masiixiga ilaa diinta Islaamka, ka hor inta aan dib loo celin. Waxa uu rajaynayaa nabadda Muslimiinta iyo Masiixiyiinta, oo waxay yiraahdeen waa "Hal qof".
Weah wuxuu sidoo kale ku shaqeyn jiray Protestantism.
Bishii Oktoobar 2017, waxaa lagu arkay kaniisadda caanka ah ee reer Nigeria ee Towxiidka Tiibishanka ah oo uu weheliyo Senator Prince Yormie Johnson.
TB Yashu waxaa la sheegay inuu saameyn muhiim ah ku leeyahay go'aanka Johnson ee ah in la aqoonsado musharaxa Weah ee doorashada 2017 Liberian.
George Weah Sheeko Xeeldheer Xog -Wiilka saxda ah ee Liberia
Weah wuxuu si weyn ugu lug lahaa arrimaha waddanka uu ka soo jeedo dagaalkii sokeeye intii uu ku sugnaa kubada cagta.
Isagoo fahamsan muhiimada kubada cagta ee ah xoojinta xasilloonida ee Liberia, Weah wuxuu ku qarashgareeyay $ 2 miisaankiisa lacagtiisii ​​gaarka ah ee safarka safarka, qalabka iyo qarashka mushaarka ee xulka qaranka, Lone Stars.
George Weah Sheeko Xeeldheer Xog -Personality
George Weah wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee shakhsi ahaantiisa.
Awoodaha: George Weah waa iskaashi, diblomaasiyadeed, roonaan, caddaalad, bulsho
Tabar-darrada: George Weah wuxuu noqon karaa mid jilicsan oo leh is-niyad naxariis. Taas ayaa ka dhigeysa inuu ka hortagayo iskahorimaadka oo uu qaadi karo jahwareer.
Maxuu George Weah jecelyahay: Harmony, niyadjab, wadaagista dadka kale iyo ugu dambeyn, nolosha dibadda.
Maxaa George Weah Jacayl: Rabshadaha, Cadaalad darrada, Dhawaaqa iyo codadka.
Qoraal guud, George waa mid nabad ah, caddaalad ah, iyo necbaansho kali ah. Iskaashiga aad ayuu muhiim u yahay isaga.
George Weah Sheeko Xeeldheer Xog -Madaxtooyada
George Weah wuxuu u tartamayay madaxtinimada Liberia isagoo xubin ka ah Congress-ka xoriyatul-dimuqraadiyadda ee 2005, lakiin waxa uu ku guul daraystay in Ellen Johnson Sirleaf oo ka tirsan Xisbiga Midnimada. 2011, wuxuu mar kale ku jiray tigidhka CDC, waqtigan madaxweyne ku xigeen, laakiin Sirleaf ayaa sii waday xafiiska.
Weah la'aanta waxbarashada ayaa noqotay arrin ololaha. Wuxuu ahaa mid aad u dhaleeceynaya kuwa ku dheha inuusan ku habooneyn in la xukumo. Wuxuu markii hore codsaday in uu haysto shahaadada BA ee Maareynta Isboortiga ee Jaamicadda Parkwood ee London, si kastaba ha ahaatee, tani waa shahaadad dibloome ah oo aan wax danbi ah lahayn oo aan u baahneyn daraasad. Weah kadibna waxay ku qaadatay shahaadada maamulka ganacsiga ee Jaamacadda DeVry ee Miami.
Inkasta oo dib-u-dhicii siyaasadeed, Weah ayaa weli ah mujtamac aan caadi aheyn oo caan ka ah waddankiisa hooyo. Bishii Abriil 2016, Weah waxa uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu u ordo madaxweynaha Liberia markii labaad. Horyaalka Kubadda Cagta God wuxuu ugu dambeynti noqday Madaxweynaha Liberia bishii December 2017 ka dib markii uu jabiyay Madaxweyne kuxigeenka Joseph Bakai.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta Sheekada Waalidiinta ee George Weah iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Taariikhda wax laga beddelay: Maarso 10, 2019
Taariikhda wax laga beddelay: Maarso 4, 2018
Taariikhda wax laga beddelay: Febraayo 9, 2018
Yaya Toure Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Taariikhda la beddelay: Agoosto 4, 2018
Wilfried Zaha Hooyo sheeko dheeraadka ah Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha